I-Arduino MKR WAN 1300 ne-Arduino MKR GSM 1400, amabhodi amasha we-IoT avela ku-Arduino Project | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Arduino MKR WAN 1300 ne-Arduino MKR GSM 1400, amabhodi amasha we-IoT avela ku-Arduino Project
UJoaquin Garcia Cobo | | I-Arduino
Ngalezi zinsuku umbukiso obaluleke kunayo yonke weMenzi wenzekile eNew York. Umbukiso lapho amaphrojekthi athandwa kakhulu futhi angaziwa kakhulu ethule amaphrojekthi awo namadivayisi abo amasha. U-Arduino ubekhona nakule Fair futhi wethule amabhodi amabili amasha omndeni wakwa-Arduino.
Lezi zingcwecwe zaziwa ngokuthi I-Arduino MKR WAN 1300 ne-Arduino MKR GSM 1400. Amabhodi amabili amancane agxile emhlabeni we-IoT futhi nakanjani azosiza umsebenzisi ukwenza amaphrojekthi we-smart noma okungenani abambe iqhaza kwi-Intanethi Yezinto.
Ibhodi leMKR WAN 1300 linokuxhumana okungenantambo okuxhunywe kusakhiwo sebhodi IBhodi leZero le-MKR, okungukuthi, sizoba nokuxhaswa kwezinhlelo zokusebenza ezingama-32-bit. Izici zepuleti I-256KB yememori ye-flash ne-32KB SRAM. Ingasebenza ngamandla we amabhethri amabili we-1,5V futhi konke ngosayizi ka-67,64 x 25mm. Ngokuba nokuxhumana okungenantambo, idivayisi oxhuma kuyo izoba nethuba lokuxhumana ne-Intanethi.
Ibhodi le-Arduino MKR GSM 1400 liyindlela elandela indlela yamaphrojekthi amaningi we-IoT. Leli puleti, njengoba isichazamazwi salo likhombisa, iqukethe imodyuli ye-GSM ezovumela ukuxhumana okukude ngaphandle kwesidingo somzila, kuphela nge-sim khadi yeselula. Ukwakheka kwazo zonke ezinye izingxenye zebhodi kuyafana neBhodi ye-MKR Zero, kepha ukusetshenziswa kwamandla akufani nokwakwibhodi le-MKR WAN 1300, ekubeni ngaphezulu. Ipuleti I-MKR GSM 1400 idinga okungenani ibhethri elilodwa le-3.7V LiPo ukuze usebenze kahle. Lokhu kukhushulwa kwamandla kungenxa yemodyuli ye-GSM ibhodi enayo, kepha lokhu akusho ukwanda kosayizi, ukuba nosayizi ofanayo nebhodi le-MKR WAN 1300.
Lezi zinhlobo ezimbili ezintsha zamabhodi e-Arduino zingagcinelwa ukuthengwa ngewebhusayithi esemthethweni ye-Arduino. Ibhodi le-MKR WAN 1300 libiza ama-euro angama-35 ngenkathi ibhodi le-MKR GSM 1400 libiza ama-euro angama-59,90. Izintengo ezimbili ezinengqondo uma sicabangela ikhwalithi yamapuleti nomphakathi omkhulu onale phrojekthi. Ngakho-ke kubonakala sengathi i-Arduino isalwela ukwakhiwa kwemvelo yamahhala ye-IoT. Noma kunjalo Ngabe lawa mabhodi azoba nempumelelo efanayo neka-Arduino Yún? Ucabangani?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Arduino MKR WAN 1300 ne-Arduino MKR GSM 1400, amabhodi amasha we-IoT avela ku-Arduino Project
INanoDimension yethula iDragFly 2020 Pro entsha
Ama-Drones manje angahamba ebumnyameni ngenxa yokusetshenziswa kwama-retina wokufakelwa